Halyayga Aan Loo Heesin-Siduu Ciro Immobile U Noqday Xidiga Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Hal Mar Dariiq Wada Mariyay Iyo Lama Filaanadii Xili Ciyaareedkan. - Gool24.Net
Halyayga Aan Loo Heesin-Siduu Ciro Immobile U Noqday Xidiga Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Hal Mar Dariiq Wada Mariyay Iyo Lama Filaanadii Xili Ciyaareedkan.
August 2, 2020 Mahamoud Batalaale
Xili ciyaareedkan waxaa la diwaan galiyay waxyaabo aan marnaba la rumaysteen bilawgii xili ciyaareedkan waxaana ka mid ah in xidiga kooxda Lazio ee Ciro Immobile uu hal mar dariiq wada mariyay labada xidig ee aduunka soo qabsaday in ka badan tobanka sanadood ee Messi iyo Ronaldo.
Ciro Immobile ayaa lagu tilmaami karaa in uu yahay halyayga aan loo heesin kadib markii uu soo afjaray abaal marinihii xidhiidhka ahaa ee uu Lionel Messi ugu soo guulaysanayay kabta dahabka ah ee Yurub isla markaana uu Cristiano Ronaldo ku garaacay laba abaal marinood.
May jirin cid rumaysan karaysay bilawgii xili ciyaareedkan in Ciro Immobile uu Cristiano Ronaldo ku garaaci karayo kabta dahabka ah ee gool dhalinta Serie A, sidoo kale may jirin cid aamini lahayd in la sheego in immobile uu joojinayo rekoodhka kabta dahabka ah ee Messi ku soo socday.
Laakiin hadda wax walba Ciro Immobile waa xaqiiq wuxuuna Ciro Immobile noqday ciyaartoyga hal xili ciyaareed gudihii meel wada mariyay Messi oo kabta dahabka ah ee Yurub si xidhiidh ah ugu soo guulaysanayay iyo waliba Cristiano Ronaldo oo doonayay in uu rekoodhka Messi ku soo dhawaado.
Immobile waxa uu sidoo kale barbareeyay rekoodhkii gool dhalinta abid ee horyaalka Serie A oo uu xili ciyaareedkii 2015/16 kii dhigay Gonzalo Higuain kaas oo dhaliyay 36 gool.
Ciro Immobile haddii uu barbareeyay rekoodhkii gool dhalinta abid ee Serie A ee uu haystay Gonzalo Higuain waxa kale oo uu ciida ku rogay rajadii kabta dahabka ah ee Yurub ee uu Robert Lewandowski isa siiyay markii uu horyaalka Jarmalka ku dhamaystay 34 gool.
Xaqiiqda marka la eego may jirin cid badan oo aaminsanayd in Immobile uu noqonayo xidiga gool dhalin ku soo gaadhaya Lewandoski waxaana la shakisanaa in Messi ama Ronaldo uu noqonayo cida kaliya ee Lewy kabtan u diidi karaysay balse sheekadu sidii la filayay way iska badashay.
Ciro Immobile waa 30 sano jir qaatay xili ciyaareedkiisii abid ugu fiicnaa waxayna gooasha layaabka leh ee uu soo dhaliyay kooxdiisa Lazio ka caawiyeen in ay u soo baxday Champions league wuxuuna galaaftay kooxda AS Roma oo ku fashilantay in ay Champions league ka soo qayb gasho.
Dhinaca kale Immobile waa ciyaartoygii shanaad oo kaliya ee Talyaani ah ee horyaalka dalkiisa Serie A ka dhaliyay 30 gool ama ka badan waxaana uga horeeyay afarta ciyaartoy ee kala ahaa Giuseppe Meazza (1929-30), Felice Borel (1933-34), Antonio Angelillo (1958-59) iyo Luca Toni (2005-06) oo kaliya.
Immobile waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee Serie A ka ciyaara ee kabta dahabka ah ee Yurub ku guulaystay tan iyo wixii ka danbeeyay Francesco Totti ee xili ciyaareedkii 2006/07.
Waxa kale oo uu Immobile noqday ciyaartoygii saddexaad oo kaliya ee Talyaani ah ee kabta dahabka ah ku soo guulaystay waxaana ka horeeyay Luca Toni oo xili ciyaareedkii 2005/06 ku soo guulaystay iyo Totti oo xili ciyaareedkii xigay kabtan ku guulaystay.
Intii lagu jiray 13 kii sanadood ee ugu danbeeyay waxay kabta dahabka ah ee Yurub noqotay mid si sahlan lagu saadaalin karayay maadaama oo Messi iyo Ronaldo ahaayeen labada ciyaartoy ee kaalmaha kowaad la siinayay laakiin laba jeer ayuu Luis Suarez soo dhex galay intii lagu jiray 13 kii sanadood ee ugu danbeeyay.
Laakiin Immobile ayaa noqday mid meel aan laga filayn ka soo baxay isla markaana dariiq aan hore loo arag mariyay Messi iyo Ronaldo oo kabta dahabka ah si toos ah ugu soo tartamayay tan iyo wixii ka danbeeyay 2008/09 kii markaas oo uu Diego Forlan kabta dahabka ah ee Yurub ku soo guulaystay.
Immobile waxa uu xili ciyaareedkan ku dhamaystay isaga oo 10 gool oo horyaalka ah ka sareeya ninka kabta dahabka ah ee Yurub soo yeeshay ee lionel Messi, waxa uu 4 gool ka sareeyaa ninka ugu magaca wayn horyaalka uu ka ciyaarayo ee Serie A ee Cristiano Ronaldo wuxuuna 1 gool ku garaacay Robert Lewandowski oo noqday mid aan nasiib lahayn.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo dhamaaday xili ciyaareed wada dhacdooyin aan la filayn ah waana min joojintii fayraska karoonaha, ku guulaysiga Jamie Vardy ee kabta dahabka ah ee gool dhalinta England iyo wacdaraha layaabka leh ee Ciro Immobile.